‘मलाई देखेर कोही नभागुन् ‘ – Todays Nepal
उनी चाहन्छन् आफूसँग कोही नडराउन् । अरूजस्तै आफू पनि सामान्य मान्छे हो भन्ने सबैले अनुभूति गरिदिउन् । बस चढ्दा आफू सिटमा बसेपछि सँगैको मान्छे उठेर नजाउन् । सानैदेखि मान्छे डराएर भागेको भोगाइले देउराली प्युओरबेंसीका भगवान् शाह हैरान छन् । २० वर्षअघि स्कुल पढ्दा उनीसँगै पढ्ने विद्यार्थी डराएर भाग्ने गर्थे । यही पिरले सात कक्षा पढ्दा पढ्दै उनले पढाइ छाड्नुपर्‍यो ।
यो पीडाबाट मुक्ति लिन भएको एउटा खेत बन्धकी राखेर अप्रेसन गरे । ६० हजार खर्च भयो । तर, त्यति खर्चले एउटा पोको मात्र फालियो । ‘एउटाका लागि त त्यति खर्च भयो, शरीरभरिको मासुको डल्लो फाल्न कति लाग्ला ? ’, अत्तालिँदै उनी भन्छन् ।
हत्केलामा मासु पलाएर राम्ररी समात्न, पैतालामा मासु पलाएर हिँड्नसमेत नमिल्ने अवस्था हुन थालेको उनी बताउँछन् । आँखाको दुवैतिर मासु पलाउन थालेको छ । कुनै दिन आँखा नै बन्द हुन्ने त्रासले अझ मरूँ कि बाँचुँजस्तो लाग्न थालेको उनले बताए । ‘बुबाआमालाई लाने कालले मलाई लिन किन नआएको होला ? ’, आफंैलाई धिक्कार्छन् उनी ।
मान्छेकाे मृत्युपश्चात के हुन्छ ? भगवान गौतम बुद्धको रोचक कथा प्रसङ्ग